माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोलेको २४ घण्टा नबित्दैँ प्रचण्डमाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, खुमलटार तरंगित ! – GALAXY
माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोलेको २४ घण्टा नबित्दैँ प्रचण्डमाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, खुमलटार तरंगित !
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी फुटाएको आरोप लगाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले तत्कालीन नेकपाभित्रको राजनीतिक संकट निम्त्याउने पात्र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड नै भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
प्रचण्डसँग मिलेर नेपालले ओलीलाई राजनीतिक रूपमा विस्थापन गर्न खोज्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्भाग्य भएको उनको टिप्पणी रहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।